မိုးစက်ပွင့်: November 2011
လွပ်လပ်ပေါ့ပါး စိတ်ရောင်စုံပန်းပွင့်များ အတွက် အပြာရောင်မိုးရေစက်လေးများ .....
snowStorm.flakesMaxActive = 96; // show more snow on screen at once
snowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker up and down of view
ကျမ နယ်တကာ ခရီးသွားရင်း သိပ်လှတဲ့ ဧရာဝတီကို အကြိမ်ကြိမ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရဘူးပါတယ်။ အမိ ဧရာဝတီကတော့ တခေါက်နဲ့ တခေါက် မရိုးအောင် လှနေတော့တာပါပဲ။ အလှအဆုံးအချိန်တွေကတော့ မနက် စောစောနေထွက်ချိန်နဲ့ နေ၀င်ချိန်တွေပဲပေါ့။ အရောင် အမျိူးစုံတဲ့ တိမ်တွေရယ်၊ သူတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပေးတဲ့ ရေပြင်ကျယ်ကြီးရယ်.... ၀မ်းတထွာအတွက် ရုန်းကန်နေကြရတဲ့ တံငါလှေငယ်ရှင်လေး တွေရယ်က အလှပြည့်စုံတဲ့ ပန်းချီကားတချပ် ဖြစ်လာစေပါတယ်...။
အောက်ပုံကတော့ ပခုက္ကူ ရွှေမုဌောဘုရားပေါ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ...။ ဟော- သဲသောင်ပြင်ပေါ်မှာ မီးခိုးတလူလူနဲ့၊ ကျွဲနွားကိုယ်စီနဲ့ ထွန်ရေးငင်လို့ စိုက်ဖို့ပျိူးဖို့ ပြင်နေကြပြီကော....။
မြစ်ပြင်မှာ ဖြတ်မောင်းလာတဲ့ စက်တပ်လှေငယ်လေးရဲ့ နောက်က ရေလှိုင်းဂယက်တွေကို သဘောကျမိပြန်တယ်။
“ရေတွေမြင်ရတာ စိတ်ကို ကြည်လင် လန်းဆန်းစေတယ်နော်- မကြီး” အနားက ညီမငယ်က အဖေါ်ညှိနေပြန်တယ်။ ”အေးပေါ့ကွယ်၊ ရေတွေက လူတွေရဲ့ ဘ၀ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အထိ မဖြစ်စေဘူး ဆိုရင်ပေါ့”။ ကျမ ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သူကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာပေါ့။
တချိန်က မုန်ယိုတဲ့ဆင်တစီးလို ဒေါသကြီးခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့လည်း ပန်းဝါ၀ါကလေးတွေပန်လို့ လှလှပပ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေတဲ့ ယောချောင်းကလေး။ ပြီးတော့ သင်ဖြူးခင်းထားတဲ့ သဲသောင်ပြန့်ပြန့်။
ပခုက္ကူနဲ့ ပေါက်မြို့နယ်အစပ်က လှပတဲ့ ရေကန်တကန်။ ပြီးတော့ ကိုင်းပင်လှလှလေးတွေ။
ပုံပြင်တွေထဲမှာ အပြစ်ကင်းပါတယ်လို့ အမြဲတမ်း တင်စားခံရလေ့ရှိတဲ့ သိုးငယ်ကလေး တအုပ်...။
ဘုရား စေတီနဲ့ လှပတဲ့ မြစ်ကမ်းပါး တနေရာ။
အလှအပတွေ တကန့်ုခြားပြီး လက်တွေ့ဘ၀ရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်..။
ယောချောင်း၊ ကျောချောင်း၊ ချစ်ချောင်း။ ယမားချောင်း အသွယ်သွယ်က လျှံတက်လာတဲ့ လှိုင်းတွေ ရေတွေက နဂိုက အခြေမခိုင်တဲ့ ကျေးလက်ဒေသခံတွေရဲ့ ဘ၀ကို ရိုက်ချိူးဖျက်ဆီးလိုက်သလိုပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်လျော့ အားငယ်တာကိုမတွေ့ရဘဲ တက်ကျိူးရင် လက်ထိုးလှော်မဲ့ အားမာန်တွေ တွေ့နေရပါတယ်။ လောကဓံကို ထုသားပေသားကျနေကြပြီလေ။ ယာယီရွက်ဖျင်တဲ့ တာရပတ်မိုးထားတဲ့ တဲကလေးတွေထဲမှာ တောင် ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ တောက်ပတဲ့ ဒီလိုအပြုံးတွေ မြင်နိုင်ပါသေးတယ်..။
ဖေးမကူညီတဲ့ လက်ကလေးပေါင်းများစွာကလည်း မြန်မာပြည် တနှံတလျားက စီးဝင်နေကြလေရဲ့။ အဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ အားပေးရင်း ...... တတတ်တအား ကူညီဖေးမရင်း ခရီးဆက်ခဲ့ရပြန်ပေါ့။
ကျမ စာကလေး အဆုံးသတ်မှာ အားမာန်ရှိတဲ့ ကဗျာရှည်လေးတပုဒ်ကိုလည်း မျှဝေချင်ပါသေးတယ်...။ ရေးသူက အရှင်ဥတ္တမ(စဉ့်ကူ)တဲ့...။
”အလိုဘုရား” လို့၊ တ လိုက်ချိန်မှမရ
ဆိုင်းဘုတ်က စံပြကျေးရွာ တဲ့။
Posted by Me at 19:107comments: Links to this post
Labels: ခရီးသွားခြင်း, ဓါတ်ပုံ
ယောချောင်းနဘေးက ကမူကလေးမှာ ထိုင်ရင်း သားနာမည်ကို ဘိုးတင် တီးတိုးရေရွတ်နေမိ၏။ ဘိုးတင်၏ မှုန်ဝါးဝေသီနေသော မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်ခိုးများနှင့် ပို၍ မှိုင်းမှုန်လို့နေသည်။ ဘိုးတင်မိန်းမ ဒေါ်ရွှေ ကတော့ တခြမ်းပြိုပျက်နေသည့် အိမ်ကလေး၏ အိမ်ရှေ့ကြမ်းပြင်တွင် တုံးလုံးပက်လက်မှိန်းလျှက်။ အိပ်ပျော်နေတာတော့ မဖြစ်နိုင်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အမယ်ကြီး၏ မျက်လုံးထောင့်မှ စီးကျနေသည့် မျက်ရည်စများကို သူမြင်နေရသည်။ ထိုအချိန်တွင် လူလှအကြောင်းတွေးနေမှာဘဲဟု သူအတပ်သိသည်။
ထိုစဉ် ကျောပိုးအိပ်ကိုလွယ်၍ လူရွယ်လေးတစ်ယောက် သူတို့ဘက်သို့ လျောက်လာသည်ကို မြင်ရသည်။ မသစ်လွင်လှသေည်လည်း သေသပ်သည့် အ၀တ်အစားကြောင့် ဒီရွာက မဟုတ်မှန်းတော့ သူသိသည်။ ပြုံးပြရင်း “အဘက ဒီရွာကလား” ဟု နှုတ်ဆက်၏။ “အေး” ဟုသာ ဖြေလိုက်ရသည်။
“ ကျွန်တော်က ရေဘေးကူညီရေး အဖွဲ့ကပါ၊ ရိက္ခာထုတ်တွေ ဝေပေးနေတာ အဘတို့အိမ် ရပြီးပြီလား..”
“ အဘ ချွေးမ သွားယူထားပါတယ်ကွယ်”
“ အဘတို့ ရေဘေး ဘယ်လို ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြောလို့ရရင် ပြောပြပါလားအဘ ”
တကယ်ဆို သူအဲဒီအကြောင်း ပြန်မတွေးချင်။ ခြောက်အိမ်မက်ကြီးလို ဖြစ်နေသည်။ သို့ပေမယ့် လူရွယ်လေး၏ ရည်မွန်သည့် တောင်းဆိုချက်ကို သူမငြင်းနိုင်။ ချောင်းတချက်ဟန့်ရင်း သူ့ရင်ထဲက တစ်ဆို့နေသည့် နာကျင်မှုတွေကို အရင်ရှင်းလိုက်သည်။
“ အိမ်း…၊ အဘတို့တစ်သက်၊ အဖေတို့တစ်သက် မကြားဖူးပါဘူး လူကလေးရယ်..၊ ဒီယောချောင်းကြီးကို မှီပြီး အဘတို့ ကြက်သွန်စိုက်၊ ပဲစိုက် အသက်မွေးခဲ့တာပါ၊ နှစ်စဉ် ရေတက်ရေကျတော့ ရှိစမြဲပေါ့..၊ တခါတလေလဲ ဒူးလောက်ပေါင်လောက် ရှိပါရဲ့..၊ အခုလို ကြောက်ခမန်းလိလိ တက်တာမျိူးကတော့ …….”
လူရွယ်လေးက သူ့ရှေ့တွင် အသာအယာ ထိုင်လိုက်သည်။ နားလည်သော အားပေးသော အပြုံးဖွဖွဖြင့် သူ့စကားကို ငံ့လင့်သည်။ သူ့မျက်စေ့ထဲတွင် မြင်နေရသည်က မနက်စောစောကြီး ရေတွေ အိမ်အောက်ကို ဒလဟော စီးဝင်လာတာ၊ လူတွေ ပြေးကြလွှားကြတာ၊ နွားတွေအော်သံ၊ ဆိတ်တွေအော်သံ၊ နောက်ပြီး ယောချောင်း၏ ကြုံးဝါးသံ။
ရင်ထဲ ဆို့နင့်လာသဖြင့် နောက်တကြိမ် ထပ်မံ၍ သူ ချောင်းဟန့်ရပြန်သည်။
“ ဟဲ့…. မယ်ရွှေ မယ်ရွှေ ထစမ်း ထစမ်း၊ လူလှ လူလှ ”
မိန်းမနှင့် အိမ်ထဲက သားကို သူ လှမ်းနှိုးလိုက်သည်။
“ ကျွန်တော် ဒီမှာပါ အဖေ၊ ရေတွေ အရမ်းတက်လာတာ ထကြည့်နေတာ၊ ကျွန်တော် အခြေအနေ သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်”
အိမ်ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ သား၏ အသံ။
“ ဟုတ်ပါ့… ဒီကောင် ငါ့ထက် အအိပ်ဆတ်တာပဲ၊ ၀ီိရိယ ကောင်းချက်ကတော့ ငယ်ငယ်ထဲက ရွာမှာ သာရေးနာရေးဆို သူအိပ်ပျက်ခံပြီး ရှေ့ဆုံးက..၊ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ရွာလုံးက လူလှမပါရင် ပွဲမစည်ဘူးလို့ ဆိုကြတာ ”
ရသမျှ စက္ကန့်ပိုင်းမှာ သားအကြောင်း အမွှမ်းတင်ပြီး တွေးမိလိုက်သေးသည်။ လူကတော့ ငုတ်ခနဲ ထထိုင်လိုက်မိသည်။ မယ်ရွှေနှင့်ချွေးမ သန်းမေတို့လည်း သူ့အနားသို့ စုပြုံရောက်လာကြ၏။ အပြင်မှာတော့ မိုးက သွန်ချသလို တဝေါဝေါ သည်းနေသည်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် အိမ်အောက်မှာ ရေက ကြမ်းခင်းကိုပင် တိုက်တော့မတတ် တရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာသည်။ ရွာထဲတွင် ကလေးသံ၊ ခွေးသံ၊ နွားတွေ နှာမှုတ်သံဖြင့် ဆူညံနေသည်။ လူလှက အပြင်က အပြေးကလေး ပြန်ရောက်လာသည်။
“ အဖေရေ..၊ ရေကတော့ မနည်းဘူးဗျ..၊ ယောချောင်းဖက်ကလည်း ရွာထဲကို ဒရဟော စီးနေတာ၊ တောင်ပိုင်းက လူတွေတော့ ဘုရားကုန်းပေါ်တက်ကုန်ကြပြီ..၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ရွာလယ်က ရိုးချောက်ကြီးကို ကျော်လို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး၊ ရေက ရင်စို့ ကျော်လောက်တယ်၊ လိုရမယ်ရ မန်ကျည်းပင်ပေါ် တက်နေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်”
အိမ်ကြမ်းပြင်ကို ထိလုနီးနီး တက်လာသည့် ရေများကို ကြည့်ပြီး သားလူလှပြောတာ မှန်တယ်ဟု တွေးမိသည်။ ခေါင်းရင်းက မန်ကျည်းပင်ကြီးက နှစ်ပေါင်းရာချီနေပြီ။ ယောကျာ်းသုံးယောက် လက်ချင်းဆက်လို့ရအောင် ပင်စည်က တုတ်ခိုင်သည်။ သူ့အကိုင်းအခက်တွေက ဖြာဖြာဝေလို့။
“အေး အေး အပင်ပေါ်ပဲ တက်ကြတာပေါ့ကွာ၊ ငါ့သား မင်းအမေနဲ့ မိန်းမကို တွဲ၊ သြော် ဟဲ့ မယ်ရွှေ၊ ဒီပစ္စည်းတွေ သယ်မနေနဲ့လေ၊ သြော်- နင့်မလဲ၊ ထားခဲ့ပါဟ၊ လူအန္ကရာယ်မကျဖို့က အဓိကဘဲ” လို့ သူ ငေါက်လိုက်မိသည်။
“အိမ်ထောင်ဦး ပစ္စည်းလေးတွေ မို့ပါတော်”
မယ်ရွှေက သူ့ကို တုန်တုန်ချိချိ ဆိုရှာသည်။
“ ကဲ အဖေ လာ လာ”
ဘိုးတင်က အိမ်ထဲကနေ ရေထဲကို ခုန်ချလိုက်ကာ သားဖြစ်သူ လက်ကိုအားပြုပြီး မကျည်းပင်ပေါ် တက်လိုက်သည်။ ငယ်ငယ်ကတော့ ဒီလိုအပင်မျိူးကို တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ဘယ်မှုလိမ့်မည်နည်း။ အခုတော့ အသက်က စကားပြောလေပြီ။ သားက အပင်ခွမှာ မြဲမြဲထိုင်မိသည်အထိ တွန်းတင်ပေးသည်။ အကိုင်းကြီးကြီးတစ်ခုကို ဖက်တွယ်ထားလိုက်သည်။ သူပြီးတော့ အမယ်ကြီးအလှည့်။ အမေဖြစ်သူကိုတော့ သားက မချီပိုးယုံတမယ် တွဲဖက် ခေါ်လာရသည်။ ခက်ခက်ခဲခဲ အပင်ပေါ် တင်ပေးရပြန်၏။ အမယ်ကြီး၏ လက်ကို အပင်ပေါ်ကနေ သူ လှမ်းဆွဲ ယူလိုက်သည်။ မိုးတွေ ရေတွေက ပိုလို့ပင် သည်းကာ စီးဆင်းလာပြန်သည်။ ရွှဲရွဲစိုနေသဖြင့် မေးချင်းရိုက် မတတ်ဖြစ်နေ၏။ ရေစီးက ပိုသန်လာသည်။ ယောချောင်းဖက်က လှိုင်းလုံးကြီးတွေပင် လှိမ့်တက်လာသည်။
“ ဟဲ့.. ဘာကြီးတုန်း”
ရေထဲမှာ ပေါ်ချည်၊ မြုပ်ချည်နဲ့ အရာကြီးကို မန်ကျည်းပင်ပေါ်ကနေ သေသေချာချာ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်နီးချင်း မယ်ချစ်တို့ အိမ်က နွားကြီးရွှေနီ ဖြစ်နေသည်။ ရွှေနီက မကျည်းပင်ဘေးကနေ လျှင်လျှင်မြန်မြန် မျောပါသွားသည်။
“သားရေ သန်းမေကို တင်ပြီးရင် မင်း မြန်မြန်တက်ဟေ့”
သူ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစွာ လှမ်းအော်သည်။ ရေက ခါးလည်လောက် မြင့်တက်နေလေပြီ။ သန်းမေက တုန်ရီဖြူရော်နေပြီး လူလှလက်ကို မဖြုတ်တမ်း ဆုတ်ကိုင်ထားသည်။ ရေတွေက တဝေါဝေါ စီးဆင်းနေသည်။ စီးဆင်းနေသည့် ရေထဲတွင် အမှိုက်များ၊ ပစ္စည်းများ၊ တ၀ဲဝဲလည်လျှက် မျောပါနေကြသည်။
“သန်းမေ…နင် အရင်တက်ဟ၊ ငါတွန်းတင်မယ် နှစ်ယောက်တွဲကြီး တက်လို့ မရဘူးလေ”
လူလှက စိတ်မရှည်စွာ ပြောရင်း တွန်းတွန်းထိုးထိုး တင်ပေးလိုက်သည်။
“သား.. သား… တက်…တက် ” သန်းမေကို လှမ်းဆွဲရင်း အဖွားကြီးက အော်ပြောသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ သူတို့ အိမ်ကလေး၏ အဖီတခြမ်းက ရေစီးဒဏ်ကြောင့် ၀ုန်းခနဲ လဲပြိုမျောပါသွားတော့သည်။ လူလှက မန်ကျည်းပင်စည်ပေါ်ကို စ၍ တက်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက် ရေထဲတွင် ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြင့် သျှောင်ပေစူးလေး မြုပ်ချည်ပေါ်ချည်နှင့် ကလေးတစ်ဦး မျောလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကလေး၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို လူလှ လှမ်းဆွဲလိုက်မိ၏။
“ ဟာ... မင်းမင်းလေး ပါလား”
မယ်ချစ်၏ တစ်ဦးတည်းသော ဖတဆိုးသားကလေး မင်းမင်း။ လူလှက မင်းမင်းလေးကို မကျည်းပင်ပေါ် တွန်းတင်သည်။
“ ဦီလေး လူလှ ၊ ကယ်ပါဦး၊ အမေ အမေ၊ မျောသွားပြီ” မင်းမင်းက ကယောင်ကတမ်း အော်သည်။
“ အေးအေး၊ သားလေး မင်းအရင် အပင်ပေါ်တက်”
မင်းမင်းက မန်ကျည်းသီး တက်ခူးနေကျမို့ လူလှ၏ ပခုံးပေါ်ကနေတစ်ဆင့် မကျည်းပင်ခွကို မြန်မြန်တက်လာ၏။ ထိုအခိုက်တွင် လှိုင်းလုံးကြီးတစ်လုံး ၀ုန်းခနဲ ပုတ်လိုက်သဖြင့် လူလှ ဆယ်ပေလောက် လွင့်ထွက်သွားသည်။
“ အိုး ကိုလူလှ ” “ သားလေး ” “ လူလှ” “ ဦးလေး ”
တစ်ပြိုင်နက်တည်း အားလုံးက စိုးရိမ်တကြီး လှမ်းအော်သည်။ လူလှ သည်ဖက်ကို ပြန်ကူးခတ်လာသည်။ ရေစီးနှင့် မျောလာသည့် ပလပ်စတစ်ပုံးတစ်လုံးကို လက်နှင့် လှမ်းဆွဲရန် ကြိုးစား၏။ ပုံးကို လက်တစ်ဖက်က မှီလုမှီခင်မှာ နောက်ထပ် လှိုင်းတစ်လုံးက ၀ုန်းခနဲ ပုတ်လိုက်တော့သည်။
“ အမလေး ”
သန်းမေ၏ အလန့်တကြား အော်သံနှင့်အတူ လူလှလည်း ရေစီးထဲ မျောပါသွားတော့သည်။
သူရော၊ မယ်ရွှေပါ အော်ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် အသံများက လည်ချောင်းထဲတွင် ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ လူလှကို မမြင်ရတော့လေပြီ။ လူလှ၏ လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုသာ နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရတော့သည်။ သစ်ပင်ပေါ်မှာ လူသားသုံးဦးလုံး ငိုလို့နေကြသည်။ သန်းမေက ခုန်ချမည် တကဲကဲမို့ ဆွဲထားရသည်။ မပေါ့မပါးကြီးနှင့်မို့ တစ်သက်က နှစ်သက်သုံးသက် ထပ်မဆုံးရှုံးချင်တော့ပါ။ လင်းအားကြီးချိန်မှ စခဲ့သည့် အိမ်မက်ဆိုးက နေ့လည်ပိုင်း ရေကျသွားချိန် သစ်ပင်ပေါ်မှ ကူချပေးမည့်သူတွေ ရောက်လာသည်အထိ အထပ်ထပ် မက်နေဆဲ။ မယ်ရွှေကတော့ တွေ့သမျှလူတွေကို လူလှကိုရှာပေးဖို့ တတွတ်တွတ် တောင်းပန်နေသည်။ လူလှနှင့်အတူ ပျောက်ဆုံးနေသူ ငါးဦးရှိပြီး ကျွဲနွားများကတော့ တစ်ရွာလုံးနီးပါး ပျက်စီးကုန်ကြသည်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ကျန်ရစ်သူများကို တရားချ၏။
“ ပစ္စည်းသင်္ခါရ လူသင်္ခါရပါ ဒကာကြီးတို့…၊ ကိုယ်တိုင်လဲ တစ်နေ့ ဒီလမ်းလိုက်ရမှာ…”
ပြောမည့်သာပြောရသည်၊ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်း မျက်ရည်များ ၀ိုင်းလျှက်။
အဖြစ်သနစ်ကို ပြန်ပြောင်းပြောရင်း ဘိုးတင် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချသည်။ ယနေ့ဆိုလျှင် လူလှတစ်ယောက် ရေမှာ မျောပါသွားခဲ့တာ သုံးရက်တိုင်ခဲ့ပြီ။ သတင်းအစအန မရသေး။ ယောချောင်းကြီးက သူချစ်သော တစ်ဦးတည်းသား၊ အလိမ္မာ သားကလေးကို ရက်ရက်စက်စက် ခွဲထုတ်သွားခဲ့သည်။ သည်အဖေအမေ နှစ်ယောက်တည်း မည်သို့ ရပ်တည်ရှင်သန်ရမည်ကို မတွေးဝံ့တော့။
“ ငါ့သားအစား ငါသာ ရေထဲပါသွားခဲ့ရမှာ ” ဟု တဖွဖွ ညည်းတွားရုံကလွဲ၍ မတတ်နိုင်။ ဆုံးရှုံးသွားသည့် ကြက်သွန်ပျိူးခင်းများ၊ နွားနှင့် ဆိတ်များ၊ အိမ်ထောင်ဦးပစ္စည်းများ၊ ထိုအရာများအတွက်ကို သူ ၀မ်းမနည်းမိ။ သူတို့၏ သုဝဏ္ကသာမလို သားရတနာကလေးကိုသာ နှမျောတသနေမိသည်။ မြို့ပေါ်တက်ပြီး ကုန်ရောင်းပြန်လာတိုင်း အဖေအမေအတွက် စားစရာတစ်ခုခုမပါဘဲ မပြန်တတ်ခဲ့သည့် သားလူလှ၊ အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်၍ ရဟန်းခံပေးစဉ်ကပင် နှစ်လပြည့်အောင်ပင် မနည်းနေခိုင်းခဲ့ရသည်။ “သားမရှိရင် အဖေနဲ့အမေ ပင်ပန်းနေမှာပေါ့ ” ဟု အလိုက်တသိ ပြောခဲ့သည့် သည်သား ။ “သားမရှိရင် ....... သားမရှိရင်.... ” တဲ့။ အခုတော့…။
သူရော၊ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဖြစ်နေသည့် မယ်ရွှေပါ၊ စေတနာရှင်များ ပေးကမ်းထားသည့် ထမင်းထုပ်များ၊ မုန့်ထုပ်များကို စားချင်စိတ်လည်းမရှိ။ သား ပြန်လာတာ မြင်ရနိုးနိုးနှင့် ယောချောင်းအစပ်ကို မျှော်လို့သာနေမိသည်။ ချွေးမသန်းမေကလည်း ကယောင်ကတမ်းပြောလိုက်၊ ငိုင်ငိုင်တွေတွေ နေလိုက်၊ တငိုငို တရီရီလုပ်လိုက်နှင့် ကျန်းမာရေးက စိတ်မချရသည်မို့ အနီးကပ် စောင့်ရှောက်ပေးမည့် သူ့အစ်မမိသားစုနှင့် ပြန်နေခိုင်းလိုက်သည်။ ယခုတော့ အဖိုးကြီးနှင့် အမယ်ကြီးနှစ်ယောက်တည်း။ ဆရာတော်ကျောင်းမှာ မိသားစု တစ်ရာလောက် မှီခိုနေကြသော်လည်း သူကတော့ ကိုယ့်အိမ်ကလေးကိုဘဲ ဖြစ်သလို ထောင်မတ်ပြီး ၀ါးတိုင်နဲ့ထောက်၊ အမိုးပေါက်တွေကို တာရပတ်အုပ်ပြီး ယာယီတဲကလေး ထိုးနေလိုက်သည်။ ဒီနေရာကလေးကနေဘဲ သားကို မျှော်ချင်သည်။ သားကို လွမ်းချင်သည်။
“ သြော်… ဒီယောချောင်းကြီးကို မှီပြီး တို့တတွေ အသက်မွေးခဲ့ကြတယ်၊ ကြက်သွန်ခင်း ပဲခင်းတွေ စိမ်းလန်းစိုပြည်ခဲ့ရတယ်၊ သားကလေးကိုလည်း အိုးစည်ဗုံမောင်းတီးလို့ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ရှင်ပြုခဲ့ရတယ်၊ စားစရာ ၀၀လင်လင်နဲ့ မပူမပင် တို့မိသားစုတတွေ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်၊ အခုတော့ ယောချောင်းကြီးက ငြိုငြင်ရက်ပြီပေါ့နော်၊ ကျူပ်တို့ ယောချောင်းကြီးကို ဘာတွေများ အပြစ်လုပ်မိလို့လဲဗျာ၊ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ ဒေါသတကြီးလာပြီး သားကလေးကို ကျူပ်တို့ ရင်က ခွဲထုတ်သွားခဲ့တယ်၊ အခုတော့လည်း သူ့ရဲ့ သဲသောင်ခုံတွေက တင်းလို့၊ ရေတွေ လှိုင်းတွေမရှိပဲ တည်ငြိမ်နေလိုက်တာများ၊ ကြမ်းခဲ့ရမ်းခဲ့တာ သူမဟုတ်ခဲ့သလိုဘဲနော်…. ဟင်း.. ”
ဘိုးတင်က လူရွယ်လေးကို မကြည့်ဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း လေးလေးပင်ပင်ကြီး ရေရွတ်ရင်း သက်ပြင်းအခါခါချလျှက်။ ဘိုးတင်၏ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင် မကျည်းပင်ကြီးကလည်း စာနာဝမ်းနည်းစွာ သူ့အရွက်ကလေးများကို ပိတ်သိမ်းလျှက်....။
( ပခုက္ကူခရိုင် ဆိပ်ဖြူမြို့နယ် ရွာတရွာမှ ရေဘေး ခံစားရသူ မိသားတစု၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်တွင် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်...)
Posted by Me at 14:365comments: Links to this post
တိမ်လွှာကို မိုးထားတဲ့ တောင် (ချင်း)
happy new year!!!! နှစ်သစ်မှာ အားလုံး ကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ .......
My Favourite Photo (2)
ကလောင်ပျိူးခင်းလေး တစ်ခုအနေနဲ့ရော၊ မှတ်စုကလေးတစ်ခုအနေနဲ့ရော၊ ဗဟုသုတ ရှာမှီးရာနေရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ရော၊ ဘလော့လေးတစ်ခု ဖန်တီးမိပါတယ်..။ အမှတ်တမဲ့ သို့မဟုတ် အမှတ်တရ လာလည်သူများကိုရော၊ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် Comment ပေးကြတဲ့ ၊ စီဘောက်မှာ နှုတ်ဆက်စကားဆိုခဲ့ကြတဲ့ အနည်းငယ်သော ချစ်သူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....။
An ordinary citizen of Myanmar who always devotes to knowledge sharing ....
Book Retold (1)
Chin State (5)
Dry Zone (2)
Minimalist Series (2)
Northern Rakhine State (3)
story retold (4)
သတင်း နှင့် မီဒီယာ
Htoo Tay Zar MMR
၈၈ က ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ကောလဟာလများ (၂)
HAN's Venture Photography 2010
2012 Korean Government Scholarship Program for International Students: Graduate Programs
တောကျောင်းဆရာရဲ့ တစ်ခါက တချို့တလေ
ဖတ်စရာ မှတ်စရာ တပုံတပင်
Ma Naw Thar
Nyi Nay Min
MM Bloggers Helpdesk
Wiki Myanmar ( မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း )
You Tube ဗီဒီယို
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ
InWEnt online training
new blog templates
Network Learning (for NGOs)
Useful Search Links
Job Search (NGO in Myanmar)
Burma Study Abroad Website
Myanmar Kyat Converter
အထင်သေးခြင်း အချင်းချင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ .....
စစ်ပွဲတွင် ပထမဦးဆုံး ကျဆုံးရသူက "အမှန်တရား" ပင်ဖြစ်သည်... (ဦးသန့်)